साय​द​ २ प​छि ल​भ​ ड​य​रीमा शुशिल​, के कोरिएला त​ प्रेम​ गाथा ? (भिडियो)FilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
साय​द​ २ प​छि ल​भ​ ड​य​रीमा शुशिल​, के कोरिएला त​ प्रेम​ गाथा ? (भिडियो)
फिल्मी फण्डा । फिल्म​ साय​द​ २ ब्य​व​सायीक रुप​मा अस​फ​ल​​ साबित​ भ​यो। स​बैले आशा ग​रिएको नाय​क सुशिल​ श्रेष्ठ​लाई य​स​ले न​राम्रो अस​र​ पार्यो । त्य​स​प​छी केहि स​म​य​ ह​राएका शुशिल​लाई अब​ भ​ने फिल्म​ ल​भ​ डायरिजमा देखिने भ​एको छ​। फिल्म​ ल​भ​ डायरिजमा उन​को प्रेम​ गाथा कस्तो र​ह​ने हो त्यो फिल्म​ निर्माण​ प​छीनै थाहा होला।
फिल्म ‘लभ डायरिज’ बन्ने भएको छ । सौरभ चौधरीले निर्देशन गर्ने सिनेमाका लागि सुशील श्रेष्ठ, रुबिना थापा, विश्वजित रिमाल, बिष्णु सापकोटा, मानस थापा लगायतका कलाकार फाईनल भएका छन् । फिल्म निर्माण टिमले सुशीलको न्यु लूक्स समेत सार्वजनिक गरेको छ । सम्पादक साहिल खानले यो सिनेमामा ‘एसोसियट डाइरेक्टर’को भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
साथै, सिनेमामा साहिल र मिलन श्रेष्ठको सम्पादन समेत रहनेछ । ‘ईइस्टेर इन्टरटेनमेन्ट’को व्यानरमा निर्माण हुने लभस्टोरी फिल्ममा विनोद सापकोटाको निर्माण र बीबी ढकालको सहनिर्माण रहनेछ । चुनाव सकिए लगतै छायाँकनमा जाने सिनेमामा संजय लामाको छायाँकन, अर्जुन पोखरेलको संगीत र कविराज गहतराजको कोरियोग्राफी रहनेछ । ‘लभ डायरिज’ले भने पहिलो पटक भिडियोद्वारा फिल्म घोषणा गरेको छ ।
मेलम्चीका बाढी पिडितलाई स्वस्तिमा र दिपाको सहयोग
कोरोनाको कारण रोकियो ‘जुठे’ को प्रशारण
बेरोजगार हुनुहुन्छ ? पाँच मिनेटको फिल्म बनाउँनुहोस्, २ लाख पचास हजार जित्नुहोस्
भारतीय अभिनेता चन्द्रशेखरको मुत्यु
निशालाई निर्देशक समाजको पहलमा अमेरिका बस्ने चलचित्रकर्मीबाट नगद ५१००० सहयोग
हाँस्य कलाकार जितु ‘मुन्द्रे’ लाई जन्मदिन शुभकामना
ओलीसँग नमिल्न माधव नेपाललाई देउवा र प्रचण्डको दबाब
मेलम्ची बाढीपीडितको नाममा चन्दा वा राहत संकलन गरे जरिवाना र कैद
‘माधव नेपाल र भीम रावलरहित नेकपा एमाले अहिलेको आवश्यकता’
‘छाउपडी’ प्रथामा आधारित फिल्म ‘टालो’ युटुबमा ट्रेनिङ
कपिल सापकोटाको ‘ला ला ल्याण्ड’ (भिडियो)